Famerenana ny Leagoo S8, terminal iray tena feno amin'ny 100 euro mahery | Androidsis
Ignatius Room | | Fitaovana Android, hevitra
Iray amin'ireo mpanamboatra fiaviana aziatika izay nahavita zavatra tsara nandritra ny fotoana elaela izao, miaraka amin'ireo fitaovana sasany izay tena tsara ny sandany dia Leagoo, izay isan'ny efa niresaka tamin'ny tranga teo aloha isika.
Vao tsy ela akory izay ity mpanamboatra ity no nametraka terminal vaovao antonony vaovao, miaraka amina endri-javatra mahaliana kokoa ary tsy maintsy raisinay raha te-hanavao ny finday avo lenta. Miresaka aho Leagoo S8, terminal iray izay dinihinay tanteraka amin'ity lahatsoratra ity.
1 Leagoo S8 famaritana
2 Fitaovana fanamboarana
3 Efijery Leagoo S8
4 Fampisehoana Leagoo S8
5 Fifandraisana Leagoo S8
6 Fakantsary Leagoo S8
7 Fiarovana amin'ny Leagoo S8
8 Sary nalaina niaraka tamin'ny Leagoo S8
9 Leagoo S8 Photo Gallery
Leagoo S8 famaritana
efijery 5.7 inch IPS LCD karazana miaraka amina vahaolana 282 dpi HD
processeur MediaTek MT6750 64-bit
Unité centrale ARM Cortex-A53 amin'ny 1.5GHz
Tabilao Mali-T860 MP2 650Mhz
Fahatsiarovana RAM 3 GB
Fitahirizana anatiny 32 GB
Karana fanitarana Eny micro SD hatramin'ny 256GB
lafiny 153.5 × 70.7 × 8.8 mm
lanja Gramin'ny 185
fiarovana Fitaovana fantsom-tànana izay eo aorina
Fakan-tsary Rear Sensor novokarin'i Sony Exmor an'ny 13 mpx miaraka amin'ny f / 2.0 miaraka amina fakantsary 2 mpx
Fakan-tsary aloha Iray amin'ny 8 mpx ary iray hafa an'ny 2 mpx
tambajotra Mifanaraka amin'ireo tamba-jotra 4G LTE - 3G sy 2G
bateria 2.940 mAh miaraka amina tohana haingana
Dikan-Android Android 7.0 Nougat
loko Mainty sy manga
seranan-tsambo micro USB
Jack headphone No
vidiny 110-120 euros
Ny Leagoo S8 dia manome terminal ho antsika vita vita amin'ny aliminioma, miaraka amin'ny fisehoana manintona tena ary lavitra ny faritra ambany sy salantsalany izay ny ankamaroan'ny terminal dia vita amin'ny plastika. Ny alimo ampiasaina andriamby ho an'ny dian-tongotra, izay amin'ny ankamaroan'ny tranga dia hanana ny terminal feno dian-tànana isika, izay hanery antsika tsy hampiasa ny fonony, tafiditra ao amin'ilay fitaovana, mba tsy handany fotoana bebe kokoa amin'ny fanadiovana ireo dian-tànana noho ny fampiasana azy.
Olana iray hafa atolotray antsika ity fitaovana ity dia andriamby ihany koa izy io manintona vovoka, lafin-javatra iray izay tokony hojerena rehefa namolavola azy, satria rehefa tsy ny dian-tànana, dia ny vovoka no ho hita eo amin'ny terminal.
Efijery Leagoo S8
Ny Leagoo S8 dia manome efijery 5,7-inch manana endrika 18: 9 ary 86% ny tahan'ny efijery. Ny tontonana novokarin'i Sharp dia manolotra a fahitana tena tsara amin'ny toe-javatra iainana rehetra, na dia misy hazavana mivantana aza toy ny masoandro. Ny vahaolana amin'ny efijery dia HD, 1440 × 720, mihoatra ny ampy handrakofana ny filan'ny mpampiasa maro ary mamela ny bateria haharitra kokoa koa.
Fampisehoana Leagoo S8
Ny Leagoo S8 dia terminal ahafahantsika milalao lalao izay mitaky herin-kery saika tsy misy olana, toy ny Modern Combat, Asphalt 8 AirBorne sy ny hafa, ary saika milaza aho, satria indraindray dia toa manantona ny terminal amin'ny dingan'ny fandefasana ireo lalao, tsy rehefa milalao mihitsy isika, zavatra tokony hisaorana, fa ny manana faharetana dia tsy olana matotra loatra izany.
Ny RAM 3 GB miaraka amn'ny processeur 8-core an'ny Mediatek dia manamboatra ilay fitaovana miroso amin-moramoraNa eo anelanelan'ny menus sy ny multitasking, ny fotoana fandefasana voalohany amin'ny lalao mavesatra indrindra dia somary fohy ihany.
Fifandraisana Leagoo S8
Ity terminal ity dia mbola tsy nandray ny fifandraisana USB-C, ka rehefa manamboatra azy isika dia tsy maintsy manohy mampiasa ny micro micro veteran. Mikasika ny fifandraisan-doha an-tariby, ny Leagoo S8 dia manome antsika fifandraisana misy jack 3,5-milimetatra, jack izay nanomboka nijanona tsy hampiasaina amin'ny terminal intsony izay tato anatin'ny volana vitsivitsy dia tonga eny an-tsena, ary na aoriana kely na kely dia tsy maintsy ampifanaraho ary esory amin'ny modely ho avy.
Fakantsary Leagoo S8
Matetika ny fakantsary dia iray amin'ireo fizarana izay maneho ny tena fahalianana amin'ireo mpampiasa, ary koa ny fampisehoana atolotray antsika. Amin'io lafiny io ny Leagoo S8 mahazo malaza, saingy tsy maintsy jerentsika ny vokatry ny placebo an'ny fakan-tsary roa aoriana, satria ny sary lehibe dia maka sary tena tsara, raha ny faharoa kosa, natao ho an'ny maody sary, dia mbola mampiasa blur boribory, izay azontsika ahitsy, tsy maintsy apetraka ny lohahevitra na ny zavatra aseho foana eo afovoany. Ary koa, ny vahaolana dia ratsy.
Araka ny efa nolazaiko, ny fakantsary aoriana amin'ny terminal dia manome valiny tena tsara ho antsika, na dia amin'ny hazavana ambany aza, izay misy fantsona sasany mitovy laharana aminy, zara raha mampiseho sary eo amin'ny efijery. Ny jiro LED roa-jiro dia manazava zavatra na olona ampy tsara amin'ny sary nefa tsy mila manakaiky ny telefaona finday. Rehefa maka sary amin'ny alina, ary ao no anazavana ny zavatra ampy, ny voa sy ny kalitaon'ilay sary dia mety amin'ny vidin'ny terminal ity.
Mikasika ireo fakantsary roa eo alohany, Leagoo, dia latsaka ao anatin'ny hadisoana iray ihany ary manolotra antsika fakan-tsary roa, ny iray lehibe dia iray kalitao tena miavaka mba hanaovana selfie Ary misy ihany koa amin'ny flash aloha, mety amin'ny fakana sary mazàna amin'ny haizina sy faharoa izay mikendry ny haka sary, mampiasa ny fomba mitovy amin'ny fakan-tsary any aoriana, manaparitaka ny sisin'ny sary ary mamela ny afovoany ihany hametraka ny tenantsika ho an'ny selfie.
Fiarovana amin'ny Leagoo S8
Ary indray, Leagoo dia marika aziatika iray hafa izay noho ny tahan'ny efijery, dia nanapa-kevitra ny hametraka ny mpamaky ny rantsan-tànana ao ambadiky ny terminal, mampihena ny habeny ho faran'izay kely indrindra, zavatra misy fiatraikany amin'ny fampiasa omeny antsika, satria tsy maintsy manandrana imbetsaka isika mandra-pahatongantsika mamantatra ny dian-tananay.
Amin'izany lafiny izany, manota i Leagoo Bluboo miaraka amin'ny S8, ny haben'ny sensor, izay midika fa amin'ny ankamaroan'ny tranga, andao hamita amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny PIN fiarovana na lamina hamohana azy ary afaka miditra ao.
Sary nalaina niaraka tamin'ny Leagoo S8
Etsy ambany izahay dia mampiseho aminao ny sary samihafa nalaina niaraka tamin'ny Leagoo S8, ahafahanao manamarina izay nolazaiko momba ny fakantsary, fakantsary izay manolotra antsika tombony azo ekena ho an'ny vidiny farany omen'ny fitaovana anay.
Leagoo S8 Photo Gallery
Famerenana ny: Ignatius Room
Vidio ao Bangood
Fakan-tsary aloha sy aoriana
Tsy manana puce NFC io
Mpamaky rantsantanana kely dia kely
Andriamby ho an'ny dian-tongotra sy vovoka
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Famerenana ny Leagoo S8, terminal iray tena feno amin'ny 100 euro mahery
Tanora Oppo F5: Ny kinova tsy matanjaka an'ny Oppo F5 dia efa ofisialy
Samsung dia manomboka manamboatra ny processeur Galaxy S9